उड्न तयार भएको अवस्थामा एक्कासी पाइलटले इन्धन पर्याप्त नभएको थाहा पाएपछि...! - Everest Dainik - News from Nepal
उड्न तयार भएको अवस्थामा एक्कासी पाइलटले इन्धन पर्याप्त नभएको थाहा पाएपछि…!
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतको नयाँ दिल्ली उड्न ठिक्क परेको जेट एयरवेजको जहाजमा इन्धन पर्याप्त नभएको थाहा पाएपछि फेरि इन्धन भरेर दुइ घन्टा ढिला गरी उडेको छ।
३ः४० को उडान तालिका रहेको एयरलाइन्सले यात्रुलाई बोर्डिङ गरेर उड्न तयार भएको अवस्थामा एक्कासी पाइलटले इन्धन पर्याप्त नभएको थाहा पाएपछि रोकेर इन्धन भरिएको थियो। उक्त जहाजमा रहेका राजेन्द्र बजगाईले यसबारेमा फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन्।
यही कारणले उक्त एयरलाइन्सको उडान करिब २ घण्टा ढिला भएको छ। ३ः४० मा उड्नुपर्ने जहाज बेलुका साढे पाँच बजेटमात्र काठमाडौंबाट उडेको थियो।
विमानस्थलमा रहेका ड्युटी अफिसरले भने जहाजले बोर्डिङभन्दा पहिले नै इन्धन भरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए।
जहाज होल्ड हुँदा, डाइभर्ट हुँदा पनि पुग्नेगरी इन्धनको पर्याप्तता हुनुपर्ने हुन्छ। विमानस्थलका ड्युटी अफिसरले यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।
ट्याग्स: Jet Air